Nyaya dzinoshanda | Eindhoven uye Amsterdam | Law & More B.V.
Kana iwe ukapa mutemo wedu solid ne anomiririra zvido zvako, isu tinozozviradzika izvi muchibvumirano chebasa. Chibvumirano ichi chinotsanangura zvirevo nemamiriro atakataura newe. Izvi zvine chekuita nebasa ratichakuitira iwe, mari yedu, kudzoserwa kwemitengo uye kushandiswa kwezvinhu zvedu zvese nemamiriro ezvinhu. Mukuitwa kwechibvumirano chekugovera, iyo mirawo inoshanda, kusanganisira mitemo yeNetherlands Bar Association, inotorwa mukufungwa.
Kana iwe ukapa mutemo wedu solid ne anomiririra zvido zvako, isu tinozozviradzika izvi muchibvumirano chebasa. Chibvumirano ichi chinotsanangura zvirevo nemamiriro atakataura newe. Izvi zvine chekuita nebasa ratichakuitira iwe, mari yedu, kudzoserwa kwemitengo uye kushandiswa kwezvinhu zvedu zvese nemamiriro ezvinhu. Mukuitwa kwechibvumirano chekugovera, iyo mirawo inoshanda, kusanganisira mitemo yeNetherlands Bar Association, inotorwa mukufungwa. Basa rako richaitwa negweta raunenge uchisangana naye, pane nzwisiso yekuti Gweta iri rinogona kunge riine zvimwe zvikamu zvebasa rake kunoitwa pasi pebasa rake uye kutariswa nemumwe wevamwe magweta, vezvemutemo mazano kana vezano. Mukuita izvi, gweta richaita nenzira inogona kutarisirwa negweta rine ruzivo uye zvine musoro kuita. Pakati peichi chiitiko, Gweta rako rinokuchengetedza ruzivo, nezvakaitika, uye shanduko mune yako. Kunze kwekunge takabvumirana neimwe nzira, isu, sezvatinogona, tipe tsamba inofanirwa kutumirwa kwauri mune fomu yekunyora, nechikumbiro kutizivisa kana uchibvumirana nezviri mukati.
Iwe wakasununguka kumisa chibvumirano chekugovera nguva isati yasvika. Isu tichakutumira ziviso yekupedzisira zvichienderana nemaawa apera. Kana mari yakatarwa yabvumidzwa uye basa ratanga, mari iyi yakatarwa kana kuti chikamu chayo, zvinosuruvarisa kuti idzoserwe.
Zvinoenderana nebasa kuti gadziriro dzemari dzichaitwa sei. Law & More yakagadzirirwa kufungidzira kana kuratidza mutengo unosanganisirwa nebasa racho pamberi. Izvi zvinogona dzimwe nguva kukonzera muchibvumirano chemitero chakatemerwa. Isu tinotora iyo mamiriro emari evatengi vedu mu account uye tinogara takagadzirira kufunga pamwe nevatengi vedu. Mari yekubhadharwa kwemasevhisi edu epamutemo ndeyakareba uye yakavakirwa pachiyero cheawa kunopihwa nguva nenguva. Tinogona kukumbira kubhadhara kwekutanga pakutanga kwebasa. Uku ndiko kufukidza mutengo wekutanga. Iyi yekubhadhara mberi ichagadziriswa gare gare. Kana huwandu hwemaawa akashanda huri pasi pane huwandu hwebhadharo yekumberi, chikamu chisina kushandiswa chebhadharo yekumberi chinodzoserwa. Iwe uchagara uchigamuchira kujekesa kwakajeka kwemaawa apedzerwa uye basa rinoitwa. Unogona kugara uchibvunza gweta rako kuti rive tsananguro. Iyo inobvumidzwa yeawa yeawa muripo inotsanangurwa mukusimbiswa kwebasa. Kunze kwekunge zvabvumiranwa neimwe nzira, iyo mitengo yakataurwa ndeye yeVAT chete. Iwe unogona zvakare kukwereta mari dzakadai sematare edare remarejista, mubhadharo faindi, mabheji, mari yekufambisa uye yekugara uye mari yekutumira. Izvi zvinonzi kunze-kwe-muhomwe mari zvichabhadharwa kwauri zvakasiyana. Mune zviitiko zvinogara kwenguva refu kupfuura gore rimwe, chiyero chakabvumiranwa chinogona kuchinjwa gore rega rega neyakaiswa indexation.
Tinoda kukumbira iwe kuti ubhadharise gweta rako segweta mukati memazuva gumi nemana pazuva rechiratidzo. Kana kubhadhara kusiri kuitwa nenguva, isu tinofanirwa (kwenguva pfupi) kumisa basa. Kana iwe usingakwanise kubhadhara iyo invoice mukati menguva yakatarwa yenguva, ndapota tizivisei. Kana paine chikonzero chakakwana cheizvi, dzimwe gadziriro dzinogona kuitwa sekufunga kwegweta. Izvi zvichatorwa nyorwa.
Law & More haina hukama nePamutemo Aid Board. Ndokusaka Law & More haapi rubatsiro rwepamutemo rwekutsigira. Kana iwe uchida kugamuchira rubatsiro rwepamutemo rutsigiro ("kuwedzera"), tinokurudzira kuti ubvunze imwe kambani yemutemo.
Mukuita kwedu sekambani yemutemo uye kubvunza mutero kunowanikwa muNetherlands, isu tinosungirwa kutevedzera mutemo weDutch neEuropean kurwisa mari uye kubiridzira mutemo (WWFT), izvo zvinoda kwatiri chisungo chekuwana humbowo hwakajeka hwekuzivikanwa kwevatengi vedu. tisati tagona kupa masevhisi uye kutanga chibvumirano chehukama. Naizvozvo, rinobviswa kubva kuChamber of Commerce uye / kana kuongororwa kwekopi kana chiratidzo chakabvumika chechiratidzo chinogona kukumbirwa mune ino mamiriro. Unogona kuverenga zvakawanda nezveizvi KYC Zvinodiwa.
Mazita edu akajairika uye mamiriro ezvinhu anoshanda kumasevhisi edu. Aya mazwi ese akajairika uye makodhi anozotumirwa kwauri pamwe nechibvumirano chekugovera. Iwe unogona zvakare kuvawana pa General Conditions.
Isu tinobatanidza kukosha kukuru kune kugutsikana kwevatengi vedu. Yedu femu ichaita zvese musimba rayo kukupa iwe yakanakisa sevhisi. Kana iwe uchifanira kusagutsikana nechimwe chinhu chemasavhisi edu, tinokukumbira kuti utizivise nekukurumidza nekuikurukure nezvegweta rako. Mukutaurirana newe, tichaedza kutsvaga mhinduro kuchinetso chamuka. Isu tichagara tichisimbisa iyi mhinduro kwauri iwe mukunyora. Kana zvisingakwanisi kuuya kune mhinduro pamwe chete, hofisi yedu zvakare ine hofisi yekunyunyuta maitiro. Unogona kuwana zvimwe pamusoro penzira iyi Hofisi Yezvichemo Maitiro.